Faa'iidada iyo faa'iido darrada tuubooyinka aan xuduud lahayn sax - Kuanyu ahama Steel Co., Ltd.
Home » Faa'iidada iyo faa'iido darrada tuubooyinka aan xuduud lahayn sax
Faa'iidada iyo faa'iido darrada tuubooyinka aan xuduud lahayn sax
Sababo la xiriira baahida loo qabo wax soo saarka iyo hoos u of kharashka wax soo saarka iyo warshadaha, macaamiisha badan oo ku badelay ka qabow-gal la tuubooyin bir aan xuduud lahayn iibsiga asalka ah si sax aan xuduud lahayn tuubooyin bir. Aynu eegno at faa'iidooyinka iyo khasaaraha tuubooyinka steel sax aan xuduud lahayn:
faa'iidooyinka: 1. Sax aan xuduud lahayn xawaaraha la xirrira biibiile soomi waa iyo wax soo saarka wax soo saarka waa heer sare ah. Oo aan waxyeelo u daahan, kala duwan oo naqshado cross-qaybta la samayn karaa si loo waafajiyo shuruudaha xaaladaha. 2. habka qabow diidanaa ayaa ka dhigi kara biibiile steel sax ah soo saaraan lahayo ku siligga weyn, fiicnaado dhibic dhalidda biibiilaha steel sax ah. 3, sax biibiilaha steel sax ah waa heer sare ah, si user ah yaraynaysaa qarniga qashinka.
Qasaaraha: 1. stress haraaga jirta qaybta biibiilaha sax aan xuduud lahayn, taas oo saameyn ku sifooyinka buckling guud iyo kuwa maxalliga ah ee sax tuubooyin bir aan xuduud lahayn; 2. rigidity The free torsional ee qaybta tuubooyin bir sax waa ay yar yihiin; 3. sax qabow-giringiriyey aan xuduud lahayn tuubooyin bir The xirrira oo dhumucdiisuna waxay derbiga waa yar yahay, iyo awood u leh inay fuliyaan a load xoog maxalliga ah waa ku filnayn.